စုချစ်သူ: ချစ်ပါကွယ် ... လား... လား... လား...
Posted by စုချစ် at 11/11/2011 07:54:00 PM
ချစ်ပါကွယ်လာ လာ လာ ဆိုတော့ ဒီည ရှိခိုးဖို့မေ့နေဦးမယ်။ ဦးရေချမ်းကိုး)
အဲဒီသီချင်းတွေ အကုန်မှတ်မိတယ်။ တို့တွေငယ်ငယ်ကတော့ သီတင်းကျွတ် တေးသရုပ်ဖော်ကြည့်ရုံတင်အားမရ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆို စားပွဲပေါ်တက်ကကြပြီး တေးသရုပ်ဖော်လုပ်ကြသေးတယ်။ ငယ်ငယ်က ကစားဖော်သူငယ်ချင်းတွေတောင် သတိရသွားတယ်။ သီချင်းတွေကလဲ ခေတ်ကာလ အချိန်တွေကို ညွှန်းဆိုနေတတ်တယ်။
Your parents did not allow to watch music show, neither did my mom. This post makes me smile, KyiSu. Your cartoon drawing is also so cute. ( Pardon me for typing in English, no Myanmar typing font here :)
“ မချစ်နိုင်ပေါင်သွား----သွား----သွား---သွား ”
ဟားဟားဟား - - -
ငယ်ဘ၀ကို အရမ်းကို လွမ်းသွားမိတယ်။
မမြသွေးတို့ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ၄တန်းကျောင်းသူလောက်ရှိမှာပေါ့။ မမြသွေးတို့ အဖွားရပ်ကွက်မှာ တန်ဆောင်တိုင်ဆို နေ့ဘက်မှာ ကထိန်ပွဲ ပဒေသာပင်တွေ တလမ်းနဲ့တလမ်း အပြိုင်ခင်းကြတယ်။ ရုပ်ပုံတွေ၊ တိရစ္ဆာန်ပုံတွေ၊ မျိုးစုံလုပ်ပြီး ပဒေသာပင်သီးကြတာ။ တစ်လမ်းစီ ဆင်တူဝတ်စုံတွေနဲ့ပေါ့။ ပဒေသာပင်တွေ မဲဖောက်ချိန် ညနေဆို ရင်တွေ ခုန်နေရပြီ။
ညပိုင်းဆို ကတဲ့စင်တွေ ပတ်ကြည့်တာပေါ့။ စု ပြောတဲ့သီချင်းတွေ ဆိုကြတယ်လေ။ တို့များခေတ်က ဟော့တ် ခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေပေါ့။ မိန်းမရှာတွေ ကတဲ့စင်တွေလည်း ရှိတယ်လေ..။ မမြသွေးမှတ်မိနေတဲ့ သီချင်းလေးရှိသေးတယ်...။ စစချင်း အဖွဲ့လိုက် လက်အုပ်လေးတွေ ချီပြီး ဆိုကြတဲ့ သီချင်းလေးလေ...။
♪ ♫ ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္စာမိ...♪ ♫ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္စာမိ...♪ ♫ သံဃံသရဏံ ဂစ္စာမိ...♪ ♫
မမိစံ၊ ဆွိ၊ ကိုလွင်ပြင်၊ ညီမလေးရိုစ့်၊ ဂျစ်၊ မမြသွေး... အားပေးဖတ်ရှုလို့ ကျေးဇူးပါနော်...း)
ဲရန်ကုန်က တန်ဆောင်တိုင်ကို သတိရသွားပါတယ်။
တောင်ကြီးမှာတော့ မီးပုံးပျံတွေ လွှတ်ချိန်ပေါ့
(ကြားဘူးတာပါ။း) )
ရန်ကုန်က တန်ဆောင်တိုင်ကို သတိရသွားပါတယ်။
ဘာလုပ်လုပ် ခွင့်ပြုမဲ့ပုံး)
အဆိုတော် နောင်နဲ့ နီနီဝင်းရွှေတို့ တီဗီကလွှင့်လို့ပဲ ကြည့်ဘူးတာ..။ သီတင်းကျွတ်တွေ တစ်ခါမှ လည်ဘူးဘူး..။ အဲလိုပွဲတွေ ရှိလည်းရှိဘူး..။
ကိုခိုင် ကဗျာတွေ စုထားတယ်...
လာလည်တာ ကျေးဇူးပါ မစပယ်...း)
လာလည်သွားတယ် .. ပြုံးပျော်ရွင်သွားတယ် ဒီသီချင်းလေး နားထောင်ပြီးတော့ ။ ကျီးစု ရဲ့ ၀ိုင်းကြီးပတ်ပတ် ဒူုဝေေ၀လည်းဖတ်သွားသေးတယ် နော် :)